NextMapping | Mustaqbalka waa La Wadaagaa
Mustaqbalka waa La Wadaagaa
Jason Campbell oo ka tirsan MindValley ayaa waraysi la yeeshay Cheryl Cran oo ku saabsan ‘is-hogaaminta’ loo baahan yahay si loo abuuro mustaqbal wadaag ah.
Si aad u dhagayso codka buuxa ee wareysigan tag halkan.
Jason: Waxaan hayaa Cheryl Cran halkan, oo ah, Oh my gosh, waxaan u yeelan doonnaa daaweyn noocan oo kale ah oo looga hadlayo mustaqbalka shaqada iyo in mustaqbalka la wadaago. Waxaan ula jeedaa waxaa loo aqoonsaday inuu yahay midka ugu horreeya ee Onalytica. Markay tahay ka hadlida mawduucan, sidee ayey mustaqbalka shaqadu u egtahay? Waxay ahayd hogaamiye ka hadla ururada adduunka. Ma qortay sideed buugaag oo midkeenna sagaalaad uu imanayo oo waxa aan wax badan ka wada hadli doonno hadda waa runtii waxa dhacaya, waa maxay isbedeladaan aan ku aragno goobta shaqada hadda? Muxuu mustaqbalku u egyahay oo maxaan ka qaban karnaa si aan ugu sii jirno wax soo saar aan caadi aheyn oo aan sii wadno sameynta saameyn aan caadi aheyn. Cheryl, waad ku mahadsan tahay sidaad u joogtay bandhigga iyo soo dhaweynta.
Jason: Waxaan doonayay inaan maqlo maxay ahayd safarkaaga si aad u gasho hodantinimadan caawinta dadka inay isbadal sameyso sideese ugu suurtagashay inaad ku wareejiso garoonkaas oo aad runtii ka caawiso shirkadaha inay fahmaan waxa loo baahan yahay in la qabto?
Cheryl: Markaa socdaalkaygu waa waxoogaa caado aan caadi ahayn oo ah inaanan dhigan jaamacad ama kuliyad. Taas oo aad u badan isbedelka hadda jira!
Waxaan bilaabay shaqadayda isla markii aan ka baxay dugsiga sare oo waxaan galay baananka. Waxaan ahaa mid ku-han-weyn hanuunsan. Waxaa la i baray inaan si adag u shaqeeyo, adag oo aan u dallacay jago jago aad u yar, 23 jir ah.
Qaabkeyga gaarka ah ee hoggaamiye ahaan wuxuu ahaa inaan dejiyo himilada oo aan ku dhiirrigeliyo kuna dhiirrigeliyo dadka inay la socdaan isbedelka. Taasi waxay ahayd wicitaankeygii illaa bilowgii waxaanan xirfaddaas oo dhan waday ilaa aan ka tegay baananka oo aan aaday oo aan is qaribay oo aan u aaday caymiska, anigoo madax ka ah koox caymis oo aad u guul badan, waxaan ku sameeyey xirfadlayaal badan oo ku hadla horumarinta iyo soo iibsigayaasha. iyo kooxo kale. Marka si xirfad leh ugu hadlida ayaa had iyo goor ahayd qayb kamida bartilmaameedkeyga xirfadda sidoo kale.
Waxaan qoray buuggaygii ugu horreeyay, "Waxaad dhahdo waxaad u jeeddo - Waxaad u jeeddaa waxaad leedahay"2001dii oo buuggaasi wuxuu ku saabsanaa sidaan ugu socono mustaqbal aan hubaal ahayn iyo waxa isgaarsiinta ee aan u baahan nahay inaan taas ku dhaqaaqno.
Ka dib sideed buug ka dib, oo anigu waxaan ku dhex qaatay dhaqan gaar ah shirkaddeenna la talinta muddo ka badan 20 sano. Waan qoray buugga "NextMapping - Kaqeybgal, Fududee oo Abuur Mustaqbalka Shaqada" laba sano ka hor iyo ka hor taas "Farshaxanka Hogaaminta Isbedelka- Wadida Wadista Wadada Dhaqaaqa -". Awoodeyda shaqsi ahaaneed ee ah in aan aad u jilicsanaado ee isbedelka jahwareerka ah waa wax aan awoodey in aan ugu wareejiyo macaamiisha aan kula shaqeyno istiraatiijiyadaha shaqeyn kara laakiin sidoo kale kooxdeena iyo dadka aan ku tababarano oo aan sidoo kale latalinno.
Jason: Isbeddelka miyuu si xawli ah usocdaa xawli? Tiknoolajiyaddu miyey beddeleysaa habka aan u shaqeyno? Muxuu isbedelku u adag yahay?
Cheryl: Hagaag, waxaan u maleynayaa inay iskudhaf tahay dhamaan waxyaabaha kor ku xusan. Peter Diamandis, isuduwaha aasaaska wadahadalada jaamacadaha kali ah ee ku saabsan isbadalka lama huraanka ah iyo xawaaraha lama huraanka ah ee isbedelka. Taasina waa tan aan hadda ku nool nahay. Markaa waxaan ka wada hadalnay isbedelka muddo tobanaan sano ah, laakiin ilaa labadii kun ee isbedelka la maamuli karo. Tusaale ahaan, aan ka hadalno mashiinnada ATM-ka. Isbeddelkaasi wuxuu ahaa isbadal ku habboon oo qofkastaaba ula qabsaday si aad u dhaqso badan. Laakiin markaa markii aad haysatid labada kun iyo imminka waxaad helaysaa hal abuurnimo sharafaad ah oo ku saleysan bil kasta oo xiriir la leh labada isbeddelka teknolojiyada iyo sidoo kale isbedelka bulshada. Maskaxda dadku waxay u fureysaa waxyaabo kala duwan oo kaladuwan. Societaly waxaan ula jeedaa hada waxaan si furan ugala hadleynaa waxyaabaha aan waligood laga wada hadli laheyn toban sano ka hor runtiina waxaan eegnaa sida aan aduunka ugu hormarin karno isbadal. Laakiin waad saxantahay, isbedelka cilmi-nafsiyeed waa waxa ugu adag dadka inay sameeyaan. Waxaan ka dhaqaaqaynaa 'aniga oo aan u jeedno' kaas oo loo baahan yahay in la abuuro mustaqbal la wadaago.
Tiknoolajiyaddu waa mid fudud. Waxaad ka hadleysaa CRM iyo aaladaha, qeybtaas way fududahay. Waad dhihi kartaa, si fiican, dhibaatadan waxaa lagu xallin karaa teknolojiyad. Waa dadka culeyska haysta.
Waxaan dhayalsaneyn muhiimada ay leedahay in shaqsiyaadku iibsadaan mustaqbalka si aan u aragno mudnaanta isbadelka, in aan kuxirno isbadalka macnahooda shaqsiyeed iyo kuxirka isbedelka waxa saameynta ay ku yeelan doonto iyaga. Shakhsi ahaan. Waxaan si adag oo adag oo xoog iyo xamaasad leh u aaminsanahay in haddii aanan haysan a Beddelka habka hoggaaminta si loo helo hal abuurka teknolojiyada, waxaan sii wadi doonnaa inaan kala riixno dadka sababta oo ah cilmi-nafsi ahaan ma aaminsanahay is beddelka illaa aannaan ku xirnaan karin macnaha oo aan u maleynayo inay tahay isgoysyada aan hadda ku jirno.
Jason: Wow. Waxaan jeclaan lahaa inaan si dhab ah u baadho taas xitaa maxaa yeelay waxaan aad u yaqaana wakhtiyada aan iskudayay inaan riixo hal abuurka tikniyoolajiyada ee shirkada dhexdeeda waxaanan arkay sida qofkasta uu iga hor imaanayo iyo waxyaabo badan oo aad kahadasho markaad Ka hadal wax ku saabsan mustaqbalka in shaqadu tahay cunsurka aadanaha. Maxaad uga jeeddaa fikirkaan macnaha leh? Waxaan dareemayaa inay marar badan dadku cadaalad yihiin, iyo xitaa aniga, waxaan ku kalsoonahay in isbedelka ama teknolojiyadda ama wax kastoo soo socda ay runtii noloshayda u fududayn doonaan. Xaqiiqdii tani ma halka ay tahay farqiga ayaa ka dhacaya?
Cheryl: Buuggayga, "Farshaxanka Hogaaminta Isbedelka", Waxaan ka hadlayaa wareegga isbeddelka iyo sida aan dhammaanteen ugu dhaqanno isbeddello si isku mid ah. Macno malahan sida isbedelkeena uu qofkeena yahay, marka isbedelku dhaco, waxaa jira falcelin bilow ah oo gadaal ah, falcelin difaac ah, ficil celintaasna ma aaminsani isbedelka. Ma aaminsani in ay ka fiicnaan doonto sida ay wax tahay oo ma hubo in aan awood u yeelan doono in aan ku biiro meesha aan ubaahanahay in aan ka faa'iidaysto si aan u yeesho saameyn badan. Wejigaasi waa marxalad loo baahan yahay. Runtii waa marxalad fikir xasaasi ah. Si kastaba ha noqotee, dad badan ayaa ku dhegan wejigaas sababta oo ah waxay ku bartaan waxa aan shaqeyn doonin ama sidee qalad u noqonayaa? Markaa waxay rabaan inay farta ku ridaan tikniyoolajiyadda iyo tikniyoolajiyadda mustaqbalka isla markaana u sii gudbaan marxaladda xigta, taas oo ah waxa aan ugu yeedho xalka hal-abuurnimada, halka aad ka bilawdo inaad eegto, sifiican, haddii ay tahay, markaa haddii aan kugu mashquuli lahaa Jason iyo bedel, intii aan kuu imid oo aad u faraxsanahay oo dhahno waan beddeleynaa, waxaan helnay CRM-da cusub, waa wax laga argagaxo.
Waxay noqoneysaa inay wax walba kuu sahlanaato. Jawaabtaada ugu horeysa waxay noqon doontaa shaki. Waxaad u maleyn doontaa inaan kaa iibinayo xamuul weyn oo dhan oo aad ogtahay waxa? Ma noqon doontid inaad igu aaminto ama tikniyoolajiyadda maxaa yeelay waxaan isku dayayaa inaan kaa iibiyo. Hadana markaan ka hadlo macnaha, waxay ku saabsan tahay ku xidhitaanka waxa loola jeedo Jason iyo shaqadiisa. Si loo fiiriyo iyada oo loo marayo leniska in mustaqbalka la wadaago. Marka, taa bedelkeeda, haddii aan kuu imaado oo iraahdo, waxaan sahaminnay CRMs badan, dhab ahaantii waxaan jeclaan lahayn ra'yigaaga ku saabsan iyaga. Waxaad noo sheegaysaa sida ay isbeddel ugu samaynayso shaqadaada maalinlaha ah? Waa maxay su'aalaha adiga kugu soo dhacayay markii aad aragto tikniyoolajiyadan suuroggal ah maxaad u maleynaysaa inaad shaqadaada nolosha ka dhigeyso mid fudud haddii aad adeegsan lahayd mid ka mid ah barnaamijyadan CRM cusub? NextMapping waxaan ka hadlaynaa qaabka PREDICT. Mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee sameynta dhammaan isbeddelladani waa isu-uruurinta. Aniguna kama hadlayo kaliya sahamada shaqaalaha caadiga ah ama sahanka macaamiisha, waxaan ka hadlayaa hal ilaa hal wadahadal macno leh oo lala yeesho dadka, bini aadamka, aadanaha ilaa aadanaha, maxaa loola jeedaa adiga? Sideed u arki kartaa inay shaqeyneyso sideese ugu abuuri karnaa abuurista qaabab aan kor ugu qaadno tan si ay ugu shaqeyso adiga iyo qof kasta oo kale heerka ugu sarreeya ee suurtagalka ah.
Jason: Cheryl, waa inaan horay u lahaan jirnay wada sheekaysi horaantii noloshayda! Hada sidaad u hadlaysid, waxaan ka fikirayaa waqtiyadaas oo dhan waxaan ku garaacay durbaanka inaan sameeyo saxdaas iyo intee iska caabin ah, intee in le'eg inaan la dagaallamo saqafka sare markii aan isku dayay inaan keeno hal-abuurnimadan, aaladahaas maxaa yeelay Aad ayaan ugu farxay. Oo bal qiyaas maxaa? Waxaa laygu yaqaanaa nin iibiya maskaxdiisa dooxada sidaas darteed qof walbaa wuxuu la imaadaa hawo shaki leh.
Marka waxaan jecelahay inaan wax yar ka sii ballaariyo qaabkan 'PREDICT' si uu noogu oggolaado inaan ku fiicnaano keenista hal-abuurnimada iyo teknolojiyadda cusub iyo inaan si uun wax-soo-saar ugu badan ka helo goobta shaqada. Iyo waxyaabo badan oo kuwan ka mid ah ayaa ku wareegsan AI, kuwaas oo aan wax yar ka hadli doonno, laakiin marka hore, aan u burburinno qaabkan PREDICT si ay nooga caawiso sidii aan uga soo bixi lahayn ama markan u caawin lahaa markan.
Cheryl: The saadaaliyo Moodhku waa aalad ka caawisa saadaalinta mustaqbalka oo marka hore waxaan raadineynaa qaabab, kaas oo ah nooca 'P PDDICT'. Moodhku wuxuu leeyahay toddobo xubnood. Waxaan ka hadli doonaa kaliya sababaha ugu horreeya ee aan macno ahaan u samayn karno laba saacadood oo muuqaal ah oo muuqaal ah oo ku saabsan moodalka PREDICT laftiisa. Waxaan ka hadli doonaa oo keliya P iyo R, P waa qaab loogu talagalay.
Aqoonsiga R Haddii annaga qudheena aan nahay milkiileyaal ganacsi ama cid kale oo dhageysata shaqsi ahaan, haddii aad rabto inaad mustaqbalka qabsato, waa inaad eegtaa qaababka, waa inaad ka eegtaa qaabab aragtiyo kala duwan. Mustaqbalka xirfadaha shaqo ee aan dhamaanteen ubaahanahay inaan horumar ku sameyno heer sare waa awooda inaad lahaato aragtiyo kala duwan.
Marka waxaad fiirineysaa dhamaan aragtiyahaan badan ka dibna waxaad eegaysaa qaababka ka soo ifbaxay dhinacyadaas oo dhan. Marka, tusaale ahaan, haddii aan fiirin lahayn shirkad si weyn u iibisa, sida iska cad waxaan uga soo uruurin lahayn xogtaas aragtida iibka, laakiin markaa waxaan raadin doonnaa qaababka ku xiraya howlaha, xisaabinta, iyo macaamiisha. Halkaasna waa meesha dahabiga ah ay tahay maxaa yeelay taasi waa waxa naloo tilmaamayo mustaqbalka maxaa yeelay hadda waan tagi karnaa, Oh sug dhowrka. Markaa iibka ayaa sheegaya dadku inay rabaan inay iskood wax u qabtaan. Hawlgallada khadka tooska ah waxay sheegaan inaan haysanno teknolojiyad lagu oggolaado dadka inay iskood wax ugu qabtaan heerka ay wax iibintu dhahaan waxaan u baahan nahay isla markaana la xisaabtamaya iyagoo leh kharash aad u badan ayaa sidaas lagu sameeyaa. Markaa wax kasta oo aragtiyahaasi yihiin, waxaan isu keennaa dhammaantood oo waxaan ku helnaa isfahan guud oo loo maro aqoonsiga qaabka. Sababtaas oo ah wadajirka ayaa noqon kara waxaan badbaadin karnaa lacag xisaabaad ah haddii aan sidan u dhaqan galno, waxaan ka caawin karnaa suuq-geynta inuu qabto shaqo wanaagsan maxaa yeelay hadda waxaan si sax ah u ognahay waxa macmiilku doonayo inuu iskiis isu adeego Waxaan ka caawin karnaa hawlgallada sidii loo xallin lahaa xalka tikniyoolajiyadda saxda ah marka la eego qaababkaas aan aqoonsannay.
Jason: Waxaan rabaa inaan ka hadlo waxbadan oo isbeddeladaan ah ee aan aragno. Aynu ku bilowno hore tikniyoolajiyada maxaa yeelay waxaan u maleynayaa in tikniyoolajiyaddu ay tahay wax runtii xiiso u leh dadka raba inay gacmahooda ku wareegaan. Marka waa maxay isbeddeladaani waaweyni? Waxaad sheegatay dhalaan furan. Waxaan ka wada hadalnay wax badan oo iska cad inay tahay asal iibka, waan ku faraxsanahay markaad kahadasho nidaamka iyo CRM. Maxay yihiin waxyaalahaas waaweyn ee aan dhowaan arki doonno oo saameyn ku yeelan kara shaqsiyaadka goobta shaqada?
Cheryl: Waan ku faraxsanahay inaan bilownay wareysiga ka hadalka dadka markii ugu horeysay maxaa yeelay NextMapping taasi waa furaha halkaan waa inaan eegno, sida iska cad, dhamaanteen waan ku faraxsanahay xaga teknolojiyada sababtoo ah waxay saameyn ku leedahay nolol maalmeedkaaga. Waxaan dhamaanteen isticmaaleynaa Siri iyo Alexa, waxaan dhamaanteen isticmaaleynaa dhaqdhaqaaqa codka, dhamaanteen waxaan isticmaaleynaa tikniyoolajiyadda taabashada. Waxaan dhamaanteen adeegsaneynaa aqoonsi wajiga, sidaa darteed waan ku faraxsanahay, laakiin waxaan dareemayaa runtii xamaasad weyn inaan ku qasbanahay inaan eegno tikniyoolajiyadda dadka muraayadaha koowaad. Waa inaan ku bilownaa su'aalaha sida:
Sidee ayay u saameynaysaa khibradda macaamiisha? Sidee bay u saameynaysaa khibradda shaqaalaha? Sidee bay u caawinaysaa aadanaha guud ahaanba? Aniguna waxaan u malaynayaa hadaanu haysano su’aalahaas safka hore, markaa inaanu hagaagsan nahay inaanu la mid noqonno dhammaan farsamooyinka hal-abuurnimo ee ina hor yaal. Waxaa laga heli karaa si loo soo dejiyo bartayada internetka loo yaqaan 20ka isbeddel ee ugu sarreeya 2020
Waxaan aragnaa dhowr waxyaabood. Midka koowaad, is dhexgalka shan G shan G wuxuu noqonayaa mid balaaran taasna macnaheedu waa hada waxaan heleynaa xitaa codsi dheeri ah oo ah dhaqdhaqaaqa codka, aqoonsiga wajiga. Dhamaan teknolojiyaddan oo aan hadda bilaabeynay inaan ku sii jirno. Xadka AI wuxuu sii wadaa inuu kordhiyo oo uu u wareejiyo waxyaabaha mustaqbalka isla markaana uu kordhiyo xaqiiqda ah in mustaqbalka la wadaago. AI waxay run ahaantii sii wadi doontaa isbeddelada sida aan u ganacsi galno, sidaa darteed ma aha inay shaqooyin qabsato. Waxay usocdaa howlaha ay dadku u qabtaan heer celcelis ah. Markaa markaan eegno isbeddelada AI, isbeddelada kale ee aan aragno waa qalabaynta otomaatiga, ururada robotics-ka culus ee waxsoosaarka, cobotsyo badan, daryeel caafimaad oo badan xagga warshadaha daryeelka caafimaadka, exoskeletons dheeraad ah oo ka caawiya aadanaha inuu kor u qaado waxyaabaha 10 jeer xoogga. ee lab ah. Waxaa jira hal-abuurnimo aad u badan. Xaqiiqdii, waan ku faraxsanahay, waxaan dhab ahaan joognaa qulqulka cudurro badan oo bini-aadamnimo oo hadda lagu xalliyo sannadaha soo socda iyadoo loo marayo tikniyoolajiyadda. Waxaan qarka u saarannahay inaan xallino waxyaabo sida jirro maskaxeed annaga oo adeegsanayna garashada VR terabiga. Daaweynta dhabta ah ee loo yaqaan 'Virtual therapy therapy' waa waqti aad u xiiso badan oo lagu noolaanayo sidaa darteedna tikniyoolajiyadani waxay u beddelayaan meeraha.
Waxaan ku leenahay meeraha 8 billion. Kala badhkood waxay kuxiran yihiin WIFI. Haatan saddexda sano ee soo socota, 75% meeraha ayaa lahaan doona isku xirka WIFI. Markaa hadaad u maleynaysid inaanu wax cusub soo kordhinay hadda 30% tirada dadka. Hadda waxaan ku darayaa ilo furan, waxaan ku darayaa xog uruurinta, waxaan ku darayaa xigmada wadajirka ah ee aan ku soo uruurineyno tikniyoolajiyadda. Waxaad yeelan kartaa laba fikir oo ku saabsan mustaqbalka.
Jawaabta lambarka koowaad waa in aad looga baqo. Ama lambarka labaad, waxaad heleysaa farxad aad iyo aad u sarreysa waxaadna fiirineysaa suurtagalnimada sida aan macno ahaan u beddeli karno meeraha. Taasna looma dhihi karo marka loo eego dhinaca ku habboon. Waxaan dhahayaa waa wax aad noo dhab ah inaan abuurno meeraha. Waxay xallinayaan caqabadaha deegaanka. Waad ogtahay, waxaan heysanaa Greta Thunberg oo kahadleysa deegaanka. Xal ayaa jira. Waxaa jira alaabooyin hada la abuuray oo leh dhibic dareere ah, balaastikada waxaa lagu soo qaadi karaa 10-kii cabbirkeedii hore. Waxaa jira hal-abuurnimo aad u badan oo aan maqalno dhammaan waxyaalaha xunxun ee ka jira warbaahinta. Kama maqalno hal-abuurnimada cusub ee wax badan ka qaban doonta caqabadaha jira, wax la soo dhaafay iyo markaa waa wakhti aad u xiiso badan oo lagu noolaado.
Jason: Cheryl, Waan jeclahay inaad awood u yeelatay inaad la wadaagto xoogaa fikrad ah waxa soo kordha. Waa wax xiiso badan, waana jeclahay sida wanaagsan ee aad u tahay, waxaan runtii rabaa in dadku ay dareemaan deganaan iyagoo ogaanaya in mustaqbalku soo socdo iyo waxa ay u tahay iyaga iyo doorkooda maxaa yeelay fikirkan ayaa ah mid ahmiyaddayda, sida, wow, isbedelkan oo dhami wuu dhacayaa. Qaybtee ayaan ka ciyaaraa? Sideen ugu habboonaan karaa isbedelka badda this? Sida xitaa kiiskeyga, waxaan durba la halgamaa waxyaabo fudud sida hal abuurnimo tikniyoolajiyada iswada, laakiin waxa aad hada ka hadashay ayaa ka baxsan waxa dadka badankood maskaxdooda ku heli karaan. Marka sidee ayaynu ugu gudbi karnaa tirobadan oo sideena qaybteenna uga ciyaarnaa?
Cheryl: Tani waa meesha aan aaminsanahay aadanaha aad u sarreeyo. Waxaan aaminsanahay aad u sarreeya in aan xallin doonno caqabado badan. Sidii aan horeyba u idhi, waxaa jira su'aalo badan aniga Weydii buugga-shaqo "NextMapping" agagaarkeeda, ma waxaad leedahay rajo laga baqdo mise waxaad leedahay maskax badan oo mustaqbal leh? Laakiin waxaan u malaynayaa wax uun, waa maxay aragtida xigta, waxay dhab ahaantii eegaysaa halka aad joogtid hadda. Markaa haddii aad ka baqeyso tikniyoolaji tusaale ahaan, ama aad ka baqeyso jiho ay bulshada u mareyso, waxaan u maleynayaa inay tahay fursad jiritaankeena nookeeni karta inaan run ahaantii kuboorno aasaaskeena. Waxaan rumeysanahay inaan ku jirno fursad horumarineed halkaan marka aad eegto isbedel, waxaad u fiirsan kartaa sida aan u baqayo, ma aqaano waxa ay la micno tahay. Ama waxaad u arki kartaa wax xiiso leh iyo in mustaqbalku la wadaagay.
Waa caadi inaad tagto halkaas. Taasi waa tan ugu horreysa ee isbeddelada la sameeyo waa wacyi-gelinta aan ka baqayo mana garanayo waxa ay ka dhigan tahay, laakiin tallaabada labaad ayaa ah qirashada taas ka dibna waxaan leeyahay, maxaan sameyn karaa si aan maskaxdayda u beddelo? Tusaale ahaan, haddii ay bulshadu ugu sii gudubto bulsho dhan si dimoqraadi ah u wada dhan ah markaa waxaan fursad u helnaa inaan dhahno: maxaa diidaya?
Miyaan ku hayey boos awoodeed? Miyirkeygu miyuu igu xamanayaa oo waxaan aaminsanahay inta aan xukunka hayo inaan guuleysto?
Mustaqbalka waa la wadaagayaa, mustaqbalku waa iskaashi, mustaqbalku waa mid wadareed. Dariiqa kaliya ee diyaar u ahaansha mustaqbalkaasna waa in aan eegno isbedel sidii calaamad noo ah horumarka. Oo halkaas waxaa jira qoto dheer oo intaa ka sii badan sida aad ka ogtahay MindValley sababtaas ayaa ah waxaad tahay waxa aad ku saabsan tahay. Waxaa jira qoto dheer oo aad u badan oo ku saabsan markasta oo isbedel dhaco ama wakhti kasta oo carqalad uu dhaco, waa baaq anaga noo ah, fursad aan ku socon karno, sidee ayaan u abuuri karaa si hal abuur leh?
Sideen ula qabsan karaa maskaxdayda si aan gadaal gadaal ugu riixo isbadalkan, laakiin waxaan dhab ahaan arkaa awooda isbedelku?
Mar labaad, adoo tixraacaya kheyraadkeyga, waad ogtahay, "Farshaxanka Hoggaanka Isbedelka" Waxaan ka hadlayaa taas. Sideen ugu samayn karnaa isbeddeladaas waxa ku xiga?
Iyo NextMapping waxaan bixinaa moodooyinkaas si dadka looga caawiyo sameynta isbeddeladaas.
Jason: Waa wax aan u maleynayo inaan dhamaanteen rajeynayno laakiin sida iska cad, waxaan mararka qaar wajahaynaa nafteena nooca dhimashada dagaalka oo ay tahay inaan soo gudubno waana jeclahay sida shaqada badan iyo waxyaabaha aad uga hadasho farsamada aad u fiican laakiin sida aad sheegtay waxaad runti tahay dhaqankeena bini aadamnimo ee la qabsiga arintaas waxaan runti rabaa inaan arko hadii aan haysano aalado badan oo aan siin karno qof kasta oo dhegeysanaya, kaasoo kujira jagada hogaaminta oo ay macquul tahay inuu ladhaqmo dadka ka dhexjira kooxdooda ee runtii leh Noocyada maan dooriyaha xun iyo sida aad dhab ahaan ugu hesho iyaga si ay ugu diyaar garoobaan isbeddelada goobta shaqada. Gaar ahaan haddii ay timaado waxyaabo xitaa soo afjari kara baahida xilalka gaarka ah ee goobta shaqada oo kale. Waxaad moodaa wax adag in la socdo. Maxaad aragtay ama maxaad filanaysaa?
Cheryl: Waxaan la soo shaqeeyay koox caafimaad oo ku nool Mareykanka waxayna la mareen dib-u-habeyn ballaaran. Marka waxaa iibsanaaya hay'ad kale, taas oo macnaheedu yahay 10 ka mid ah hoggaamiyeyaasha qolka 30 ee aan anigu fududeynayay ayaa dib loo dhisi doonaa. Ma jirin door dammaanad qaatey iyaga. Ma jirin mustaqbal qeexan oo qeexan ama dariiqa shaqo ama qorshooyin isku xiga iyaga.
Hadda, qofkasta oo dhagaysta, warka wanaagsan ayaa maanta ah, qof kasta oo dib-u-dhigid sameynaya wuxuu heystaa fursad maxaa yeelay waxaa jiri doona shaqaale yar oo gaaraya 85 milyan oo ku nool Waqooyiga Ameerika oo dhan illaa sannadka 2030 illaa iyo inta aad cimri-dheer tahay iyo awood u leh laqabsashada, waxaad yeelan doontaa fursado shaqo. Taasi waa xaqiiqda hadda. Xiligaas, 15 sano ka hor ma aysan aheyn isku mid.
Waxa aan sameynay waxaan fududeeyey wadahadal 30ka hogaamiye kooxeed ee miiska fadhiyey oo waxaan idhi, Waa kan xaqiiqda. Waa tan runta. Waxaan ku jirnaa xaalad dib u qaabayn weyn. 10 qof oo ku jira qolkan ma sii ahaan doonaan booskooda ama doorarkooda. Annagu garan mayno waxa taasi u egtahay mana garanayno halka ay taasi ku socoto, laakiin waxa aan ognahay waa in ay tahay in ay u dhacdo suurtagalnimada hay'addu in ay sii jirto, marka runta ayaa had iyo jeer guuleysata ka dibna halkan waxaan kaa caawinaynaa Waxaan ku siinaynaa tusaalooyinka, aaladaha, tababbarka, kaalmaynta, ilaha ay tahay haddii aad tahay qofka wax sii joogaya, waxaad haysataa aalado aad ku helli karto ilo iyo mustaqbal, wadadaas aad u adag ka hor intaadan la shaqeyn. xaqiiqadan cusub ee iibsashada dhabta ah. Kuwa idinka mid ah ee aan ka tagnayna, uga fikir sidii fursad. Waxaad la bixi doontaa xirmo. Waxaad awoodi doontaa inaad dib u qorto noloshaada. Waxaad awoodi doontaa inaad noloshaada dib u milicsato. Waxaa laga yaabaa xitaa inaad fursad u hesho inaad ku soo noqoto heshiiska. Aynu eegno sida midkastaba shaqsi ahaan, sida aan kuu qalabeyn karno, aan kuu caawino, kheyraad kuu siino, oo aan kugu taageerno sidii aad u abuuri laheyd mustaqbalkaaga ugu fiican ee ugu macquulsan. “
Hadda, waxaan ku faraxsanahay inaan kuu sheego in natiijadaas darteed, 10ka qof ee hela hoggaamiyeyaashooda ay ka caawinayaan iyaga sidii ay ku heli lahaayeen fursadda xigta. Hoggaamiyayaashu way tababaraan, taageeraan, hanuuniyeen, oo 10ka qof ee soo dhejiyay dhacdooyinka ayaa sheegay wixii ugu fiicnaa ee abid igu dhacay. Waxaan bartay sida loo badalo isbedelka. Waxaan bartay sida loola macaamilo mustaqbal aan la hubin iyo halkaan ku soo afjaray, waan ku faraxsanahay sidii aan ahaan jiray si kasta, sidaa darteed ma doonayo inaan wax ka dhigo xanuunka isbedelka.
Hogaamiyaasha dhageysanaya, waa inaad noqotaa inaad diyaar u tahay inaad dadka la fadhiisiiso si joogto ah oo aad u aragto inay yihiin bini-aadam, indhood is indho, dhagayso waxay ka baqeen. Ha ka fogaanin xanuunka. Ha u tirin qaar ka mid ah xalka aan kala sooca lahayn. Ka caawi iyaga inay ku raaxeystaan ​​moodeelada.
Ka caawi dadka isbedelka. Waxaan u isticmaalnaa moodeelada hogaaminta isbedelada waxaanan dhahnay, halkee u maleyneysaa inaad kujirto isbedelka hada? Sideen kuugu heli karnaa inaad abuurto xalka?
Kaliya uma sheegi kartid dadka inaad diidantahay waxaadna u baahan tahay inaad bedesho. Kaliya uma sheegi kartid dadka, nuugid, buttercup. Waan dhaqaaqnaa annaguna waan beddeleynaa si kastaba. Ma sheegi kartid oo keliya in dadku beddelaan ama dhintaan. Waa inaad ka taxadaraa guusha dadka iyo hoggaamiye ahaan waa inaad diyaar u ahaataa inaad isku duubtid gacmahaaga oo aad hoos u degto oo wasakh yeesho isla markaana aad yeelato kuwa aad u adag, wadahadallada muhiimka ah ee run ah sida ugu macquulsan ee lagu siin karo aqoonta lagu oggol yahay inaad La wadaag oo dadka u horseed meesha ay u anfacayso, ka caawi iyaga inay arkaan sida ay u caawinayso adiguna waad ku guuleysan doontaa. Ku caawi inay arkaan in mustaqbal la wadaago.
Jason: Waxaan rajeynayaa in dhamaan hogaamiyaasha dhageysanaya arintaan ay runtii arintan qaateen. Waxaad awoodeen inaad kaqeyb gasho waxyaabo badan oo la qaban karo si runti looga dhigo mid sidan u macquul ah waxaanan jeclahay in aasaaska oo dhami uu kudhisanyahay runta. . Waxaan ula jeedaa runta waa runtii waxa loo baahan yahay in la soo baxo si aad u yeelan karto wada hadaladaan daacadda ah waxaanan xitaa sii waday fidinta tan iyo markii aan dhageysanayay tan, waxaan dareemayaa in tani ay badanaa tahay wax aad u baahan tahay inaad dalbato markay tahay hogaaminta naftaada, sida aad daacad ugu tahay naftaada. Ma nooga sheegi kartaa wax dheeraad ah oo arrintaas ku saabsan? Sidey u egtahay inaan anigu kaalin ku leeyahay oo aan arki karo isbeddellada halka ay ku imaanayso dib-u-dhigiddii kaalinteyda, xirfadeyda iyo aqoontayda gaarka ah? Sideen ku helaa hogaamintaas, daacadnimadayda si aan u arko halka aan ku soo celin karo waxaana suurta gal ah inuu tilmaamo noocee ah xirfadaha aan u sii fiirin doono tababarka?
Cheryl: Is-hoggaamintu aad bay u caddahay, waxay isha ku haysaa kalsoonidaada. Haddii aan ogaado in shaqadeyda mustaqbalkeygu ay dib udarooneyso, waxa ugu badan ee aan sameyn doono waa falcelin marka loo eego madaxda Maslow taasi waa in aan isku dayo inaan nafteyda ilaaliyo.
Waana sababtaas sababta aan ugu aragnay CYA ururo badan waxaanan aragnaa in badan oo CYA ay kaa daboolayso **. Sababta aan u aragnaana waa in dadku si otomaatig ah u galaan jawaabta cabsida.
Sida, Ma doonayo inaan qaato isbadalkan sababta oo ah waxay ka dhigan tahay in aanan haysan shaqo. Waxa aan dhaho aniga oo ah tababare ahaan, markaa aan halkaa u aadno Kawaran haddii, xirfadahee aad leedahay? Waa maxay qiimaha aad keentaa? Sideed u badashaa nolosha dadka? Sideed qiimo ugu daraysaa ururka? Sababta oo ah haddii aad si macno ahaan ah u xaraysid inaad wax ku kordhiso oo aad mar walba raadineyso inaad dadka kale ka caawiso inay guuleystaan, waxaad dammaanad qaaday xasilloonida shaqada mustaqbalka, su'aal kama taagna.
Is-hogaamintu waxay ka timaadaa isku kalsoonida. Ma aaminsan tahay inaad qiimo leedahay?
Miyaad aamminsan tahay inaad u qalanto inaad u abuurto qiimo qof kale mustaqbalka?
Ma aaminsan tahay in mustaqbalka la wadaago?
Hadana haddii aad heshay isku kalsoonidaas, sida caadiga ah, kooxdiina way ku jeclaan doonaan wax ka badan sidii ay horey u sameeyeen sababtoo ah waxay u arkaan inaadan isku deyeyn inaad naftaada difaacdo. Xaqiiqdii waad aad diiradda u saareysaa iyaga iyo guulahooda inta aad ka difaacaneyso mustaqbalka mustaqbalkiisa oo haddii aad u wareejiso dhinacaas, taasi waa mid aan yareyn, Oh my gosh, Waxaan ka bixi doonaa shaqada waxbadanna waxay ka qaban doontaa Waan ogahay inaan run ka noqdo waxa aan sameeyo si aan u kordhiyo qiimaha. Taasna aniga ahaan, qofkasta oo dhagaysta oo runtii ku dhaggan fikirkaas heerkiisa ku xiga, waxaad ogaan doontaa runtii inaysan jirin wax laga baqo.
Xusuus gaar ahaaneed, waxaan ganacsade ahaa in ka badan 20 sano oo lagu daray. Toddobaad kasta waa shaki la'aan. Ma ogi halka uu macaamilku ka imanayo. Ma ogi halka ay ku socoto lacagta xigta. Taasi waa runkeyga 20 sano oo lagu daray. Waxaan rumeysanahay in qof walbaa ubaahanyahay inuu hormariyo fikir ganacsi meherad ahaan halkii aan ka qaadan laheyn fikirkaan aan haysanay sanadihii udambeeyay ee mushaarka oo dammaanad qaad ah, kaas oo ah gacanta dahabiga ah.
Xaqiiqdii waa. Waxay naga horjoogsataa inaan ka fikirno wixii ka soo baxaya adkaysiga iyo dad badan ayaa loo habeeyey barnaamij ay ku aaminaan inay uun u wanaagsan yihiin aqoonsiga shaqadooda ay ku jiraan oo u baahan in la beddelo. Aqoonsigu wuxuu u baahan yahay in loo beddelo, waan ka badanahay intaas. Waxaan u soo qaadanay qiimo ka badan intaas oo haddii aadan rumeysan taas, markaa shaqada aan u leenahay inaan nafteenna ku wareegno ayaa ah horumarinta taas oo gaarsiineysa heerka ugu sarreeya ee suurtagalka ah.
Jason: Whew. Waxaad u wacdineysaa kooxda heesta taasna guriga ayey ku dhacaysaa. Waxaan ku soo gabagabeyneynaa dhacdadan, anagoo ka hadlayna arintaan iyo suurto galnimada hal shay oo aan rabay inaan ka hadlo ka hor intaanan gooyn arintaan waa sida aan u socdo socodkeyga shaqo maalmeedkeyga, sideen ugu sii jeedaa inaan arko isbeddelada saameynaya aniga ugu dhakhsaha badan? Sida sidee ayaan Radar ugu sii wadanayaa si aan u ogaado waxa aan raadsado ee ku xiga?
Cheryl: Marka xigta NextMapping waxaan dhamaanteen ka wada hadlaynaa - “Maxaa ku xiga?” Su’aashaas waa waxbadan oo la qaban karo maxaa yeelay ma abuureyno walwal mustaqbal fog. Marka waxa aan kuu sheegi lahaa waa iyada oo loo sii jeedo isbeddeladaas waxa runtii ah in diirada la saaro waxa saamaynaya shaqsiyan mustaqbalkaaga iyo himilooyinkaaga iyo hamigaaga iyo waxa aad rabto in aad sameyso oo wax ku biiriso. Hadana isha ku hay arintaas. Waad ogtahay in tani ay tahay shaqadeenna. Aniga ahaan aniga, waxaan had iyo jeer la qabsadaa mustaqballada kale. Maxay leeyihiin? Maxay sameynayaan? Waxaan u rogay teknolojiyadda. Waa maxay isbeddelada teknolojiyadda sidee bay saameyn ugu leedahay bulshada?
Marka waxaan u maleynayaa in koofiyada mustaqbal ee aad ku jirto inta aad ku jirto shaqadaada haatan ay tahay hal shay oo aad ku bilaabi karto inaad ku footo hada halkii aad ka baqi laheyd. Dad aad u tiro badan ayaa madaxoodu ku jiraa ciidda. Ma doonayaan inay ogaadaan sida arrimuhu isu beddelaan ama waxa dhacaya. Waxaan dhahay, ha sameynin taas. Madaxaaga kor u qaad. Fiiro gaar ah, maxaa yeelay taasi waa meesha fursadaha ay iyagu isu soo bandhigayaan.
Jid ahaanna, halkan waa meeshii aasaasaha Uber iyo aasaasaha shirkadda Airbnb, ay madaxooda kor u qaadeen oo ay arkeen in mustaqbalka la wadaagayo oo la yiraahdo, kani waa meesha ay bulshadu ku socoto. Dadku waxay rabaan gawaarida iyagoo dalbanaya. Waxay rabaan inay arkaan cidda wadin doonta. Waxay rabaan inay awoodaan inay u safraan adduunka oo ay isticmaalaan degganaan qof. Markaa hadaan madaxa kor u qaadno ciidda, waxaan u aragnaa fursad. Ma jiraan wax laga baqo. Waxa kaliya ee aan ubaahanahay inaan ka cabsanno waa is-burburinteenna.
Waxaan gaynay isbaarooyinkeena- xirmooyinkeena gaarka ah iyo aniga, taasi waa waxa aan rabo inaan ka baqo waa halkee baan nafteyda joojiyaa? Xagee baan u joojiyaa awooddayda? Xagee baan ka joojiyaa fursadaha? Sababta oo ah haddii aanan mustaqbalka fiirin, waxaa loola jeedaa inaan kaliya doonayo inaan ku noolaado xumbada. Waxaan ku noolahay diidmo. Waxaan ku noolahay meel ka durugsan waxaana in badan dibi jiray wabiga. Jason, maahan wax lagu farxo. Waqti badan ayaad ku lumisaa diidmada. Su’aasheyda ugufiican ee naftayda ay tahay ayaa ah: Sideen ku noqon karaa xaas ugufiican, hooyade ugufiican, ayeeyada ugufiican, saaxiibka ugufiican, qiimaha ugufiican uheli macaamiishayda? indhaha. Waxaan rabaa in aan noqdo qofka ugu fiican ee aan kudayan karo iyo inta hadafkeygu yahay, waxaan qabaa rajo aan eheen mustaqbalka. Baqdin cabsi.
Jmagac: Cheryl, waad ku mahadsan tahay sidaad waqtigan ula qaadatay iyo wadaagida aragtiyadan cajiibka ah. Waxaan u maleynayaa in qof walba uu halkan uga tagayo isagoo leh maskax ka geddisan sidii wax looga qaban lahaa mustaqbalkeena kaas oo si dhaqso leh noogu imaan doona.